Kellogg ee Bilowga Caafimaadka | JPMA, Inc.
Dalagga soo socda ayaa ah nooca ugu caansan ee laga helo barnaamijka WIC. Laakiin maskaxda ku hay, ma aha alaabooyinka iyo qiyaasaha oo dhan ayaa loo ogol yahay barnaamij kasta oo WIC ah. U hubso inaad sirtaada ku sawirto scannadaada WICShopper si aad u xaqiijiso in ay kuu banaan tahay!
Waxaan sidoo kale wada dhignay Qaar ka mid ah jimicsi, siyaabo sicir ah oo waxtar leh si aad u jajabiso habka aad uga bixi karto habka caadiga ah ee wax lagu karinayo
Waxaad haysataa gacmahaaga si buuxda. Kellogg wuxuu abuurayaa bog internet oo dhan oo leh talooyin iyo fikrado si aad u ilaaliso nafaqada wanaagsan ee ugu sareysa liiska liiska carruurtaada.
Ku tuuro koob hadhuudh ama bariis dufan leh oo saliid ah iyo xoogaa yar oo ah xawaash. Isku day xilli xilli Talyaani ah saladh jardiinooyin leh. Wixii shay la socda koofur-galbeed, iskuday isku dar ah oregano, budada chili, iyo cumin.Faahfaahin faahfaahsan iyo macluumaadka nafaqada, booqo healthbeginnings.com.
Avocado la jarjarey ayaa ka dhigaya dalag badan oo sarreen ah. Haa, waad maqashay, avokado! Cuntada hadhuudhka ah ee ugu dambeysa oo leh dufto yaryar oo caano fadhi ah, ku dar avokado la jarjaray ka dibna ku dhameeysta boodhka budada ama cayriinka haddii aad rabto kuleyl yar. Buuxinta Tani, isku dhafka macaan iyo macaan ayaa dhadhan fiican u leh cuntada. Macluumaadka kale ee isku dhafan, cuntada, iyo macluumaadka nafaqada, booqo: healthbeginnings.com.
Cajiin khafiif ah ama qabow leh koob ama labo jajab oo jajaban ama qallalan oo qallalan lagu kariyo makiinada qunyar socodka ah ama digsiga.
Dubo oo qabooji xabbado muffins quraac ah usbuuca dhammaadka iyadoo la isticmaalayo badar ka sameysan fiber aad u sarreeya sida alwaax barafoobay ama jalaatada caleenta ah. Subax kasta, ku dhex soo muunad moofowga microwave ilaa 20 sekan markiiba ilaa diirimaad iyo jilicsan. Ka dib, jarjar muuska qeyb ahaan kuna buuxi subagga lowska iyo xaleef mooska, jeex turkey iyo jiis, ama taabasho kaydinta khudradda .Faahfaahinta faahfaahsan iyo macluumaadka nafaqada, booqo healthbeginnings.com.
Way fududahay, qulqulka hadhuudhka la jajabiyey jajabinta aad jeceshahay. Ka dib, dhex dhig digaag ama kalluun digsi si khafiif ah loo garaacay oo ku duub daaha siiriyaalka. Dubo ilaa iyo inta la karsado ilaa gogosha. Ku raaxayso! Cuntooyinka faahfaahsan iyo macluumaadka nafaqada, booqo healthbeginnings.com.
Burush siiriyaalka bariiska kuna qas kalluunka qasacadaysan ama turkey dhulka ku dar si aad ugu darsato dareenka kalluunka iyo rootiyada hilibka udgoon. Hilibka qalbi furan sida hilibka lo'da, iskuday inaad kudarto qulqulka alwaax jajaban ama alwaax la qaboojiyey si aad ugu darto fiber qaar ka mid ah hilibka iyo taabashada macaan.